स्थापनाकर्ता स्थापित छैन? P3Dv3
प्रश्न स्थापनाकर्ता स्थापित छैन? P3Dv3
6 महिना 8 घण्टा अघि #1326 by Rhodaf
5 महिना4सप्ताह पहिले #1327 by rikoooo
5 महिना4सप्ताह पहिले #1330 by Rhodaf
यसका लागि तपाईले तपाईलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ?
5 महिना4सप्ताह पहिले #1331 by rikoooo
5 महिना3सप्ताह पहिले #1332 by Rhodaf
तपाईं यति चाँडै हुनुहुन्छ ... र म धेरै गम्भीर हुँ! मैले स्वचालित सेटिङ प्रयोग गरें र यसले माइक्रोसफ्ट खेलहरूमा FSX सिर्जना गर्यो। त्यसोभए यो समय मैले उठाएको म्यानुअल ब्राउजरमा गएर मेरो P3Dv3 स्थान र बिंगो छान्नुभयो !! तपाईंको धैर्य र सहयोगको लागि धन्यबाद। 2019 को लागि सबै भन्दा राम्रो!
5 महिना2सप्ताह पहिले #1342 by rikoooo
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.255 सेकेन्ड